Mikatona Noho ny Teritery Ara-politika ny Tranomboky Eny Ambanivohitra Tantanin’Olon-tsotra Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2014 17:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, čeština , 繁體中文, 简体中文, English
Noterena nakatona ireo tranom-boky tantanin'ny olom-pirenena. Sary tao amin'ny media sosialy Shinoa, China Digital Times.
Tsy mitovy amin'ny any antanan-dehibe manankarena kokoa ao amin'ny firenena ny fitaovam-panabeazana azon'ny faritra ambanivohitra ao Shina. Olana fantatry ny rehetra izany hatsana izany, ary fikambanana marobe no natsangana mba hanatsarana ireo fotodrafitrasan'ny tranom-boky ao Shina ambanivohitra ka iantohana ireo ankizy tsy ho atao ankilabao.
Kanefa tsy ankasitrahan'ireo manampahefana Shinoa loatra ny fisantaran'andraikitra tantanin'olom-pirenena, ary noterena nakatona vao haingana ny tetikasa tranom-boky tsy miankina antsoina hoe China Rural Library (CRL) noho ny teritery ara-politika.
Nanambara ny fanakatonana ity tetikasa tranom-boky ity tao amin'ny bilaogy madinika malaza Sina Weibo ny CRL tamin'ny 18 septambra 2014, ary namoaka taratasy misokatra manazava ny teritery natrehin'izy ireo. Nalaza tao amin'ny media sosialy Shinoa ilay taratasy ary nosivanin'ny manampahefana avy eo. Namoaka dika mitovy an'ilay taratasy tao amin'ny Google Plus ny Tranokalam-baovao Tsy Miankina China Digital Times.
Nanambara ny taratasy fa nanomboka nanao teritery tamin'ny tetikasa tranombokin'ny CRL ny Minisiteran'ny Kolontsaina, ny minisiteran'ny fampianarana ary ny biraon'ny polisim-piarovana nanomboka tamin'ny volana Jiona tamin'ity taona ity. Tamin'ny tranga hafa, manafika ireo tranom-boky izay miresaka fivavahana ny manampahefana. Ohatra, noraofina ireo boky momba ny haiamamonina (sosiôlôjia) mahazatra, ny Etika Protestanta sy ny Toetry ny Kapitalisma nosoratan'i Max Weber. Noterena nakatona ihany koa ny sehatra antseraseran'izy ireo itadiavana mpilatsaka an-tsitrapo sy ny magazay fivarotana fahatsiarovana. Tamin'ny volana Septambra, tranomboky 19 manerana ny firenena no noterena nakatona. Nanipika ny CRL fa “tsy nisy tamin'ireo tranombokiny no nakatona an-tsitrapo noho ny antony tsy fahaiza-mitantana”.
Natsangana tamin'ny taona 2007 ny CRL, ny andraikiny dia «manampy ireo tanora eny ambanivohitra mba hivelatra ho toy ny olom-pirenena maoderina salama ” amin'ny alalan'ny fanomezana famakiam-boky maimaim-poana. Tao anatin'izay fito taona farany izay, niara-niasa tamin'ireo sekoly ao an-toerana sy ireo tranombokim-panjakana izy ary nametraka tranomboky 22 manerana ireo faritany 11 ao Shina. Tohanan’ ireo fanomezana sy ny fanohanana avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ny tetikasa.
Nahazo diplaoma “master” momba ny ekonomia tao amin'ny Oniverstin'i Peking ny mpanorina ny CRL, Li Yingqiang ary naniry hampiroborobo ny fahaizana abidia sy ny fampianarana amin'ny alalan'ny tranom-boky hoan'ny daholobe rehefa nahita ny tsy fisian'ny kalitaon'ny fampianarana any ambanivohitr'i Shina.
Misy ny milaza fa mety manahiran-tsaina ny manampahefana ny fanomezana avy any ivelany sy ny finoana Kristianina ananan'i Li Yingqiang. Saingy nanazava i Li Yingqiang fa raha nahazo fanampiana madinidinika mitotaly 15.000 euro avy amin'ny Fikambanana Alemana mpanampy ny hafa ny fikambanana, dia Fikambanana Mpanampy ny Hafa natsangan'ny Shinoa monina any ivelany izy io, ary avy amin'ireo olom-pirenena sy fikambanana Shinoa ny fanomezana. Tamin'ny taona 2013, nandao ny toerana maha-lehiben'ny mpanatanteraka ny CRL azy i Li ary nametra-pialàna amin'ny maha-tale azy amin'ny faran'ny taona 2014.
Amin'ny maha-fikambanana mpanao asa soa tsy miditra fivavahana sy ny CRL, nahasarika fanehoan-kevitra maro antserasera ny famoretana manerana ny firenena. Nanome fanazavana mikasika ny fikatonan'ny CRL tao amin'ny Zhihu, sehatra fanontaniana sy valiny ny mpilatsaka an-tsitrapo teo aloha tao amin'ny CRL:
Ny tena olan'ny CRL dia izy mivelatra haingana loatra. Ary maro amin'ireo tetikasany, anisan'izany ny tetikasa tranomboky hoan'ny daholobe, tetikasa sakaizan'ny antitra [tetikasa fitarihan-dalana], tetikasa fanilo sy sekoly ambanivohitra hoan'ny tovovavy no mbola eo amin'ny fahazazany. Nampitotongana ny fikambanana ny fihetsika sahisahy tamin'ny fananganana ny Oniversite Liren [tetikasa fianarana fahavaratra izay noterena hofoanana ].
Satria sahan'ady lehibe amin'ny tolona ara-potokevitra hanoherana ny soatoavina manerantanin'ny tandrefana tahaka ny “zon'olompirenena” ny fanabeazana, dia voarara ny fandraisana an-tanana ara-panabeazana rehetra ivelan'ny fifehezan'ny Antoko Komonista Shinoa.
Mihevitra ilay mpisera Weibo sy mpanohana ny CRL teo aloha, «Manohy nofy tsy misy” (@ 空空 追梦) fa vokatry ny olana ara-pitantanana fa tsy noho ny teritery ara-poliitika ny fanakatonana:
Fikorontanana tahaka izao. Nanjary tetikasa nikombom-bava ilay tetikasa tranomboky izay natao ho saimbôlin'ny fahalalahana mangina tany am-boalohany. Raha tokony handinika izay zavatra tsy mety, dia misisika miresaka momba ny fitsipiky ny ONG sy ny “olom-pirenena” ary manome tsiny ny politikan'ny governemanta ny tao amin'ny fitantanana. Mahakivy ny mahita ireo olona tsy mandray andraikitra. Amin'ny mahasakaizan'ny Liren ahy, tsy maintsy mandraraka rano mangatsiaka aho, mampaneno lakolosim-pandevenana ary mandrehitra afo amin'izao saropady izao.
Nihevitra kosa ilay mpisera Weibo malaza, “ny anganon'ny asa sosialy” (@社工迷思)” fa avy amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitantanan'ny governemanta sy ny ONG ny olana:
Nanery anay handinika momba ny “fivoarana goavan'ny fikambanana sosialy” ny fanakatonana ny Tranomboky Liren. Fanamby lehibe atrehin'ny ONG ankehitriny ny fitsabahan'ny fitantanam-panjakana. Mamaritra izy raha afaka mivelatra tsara ao Shina ny fikambanana sivily sy mpanao asa soa hoan'ny mpiara-belona.
Profesora Taiwaney Shih-Hung Lo, izay nianatra momba ny fampandrosoana ny firaisamonim-pirenena ao Shina Tanibe, nanoratra tao amin'ny bilaoginy:
Ao Shina Tanibe, nanjary asa mampidi-doza ny asa soa sy ny firaisamonim-pirenena. Tsy maninona izay fahasarotan'ny fiezahan'izy ireo hiala amin'ny politika, mety ho lasibatry ny fangejana ataon'ny manampahefana koa izy ireo. Marika mampanahy eo amin'ny toe-draharaham-piarahamonina ambanivohitra ankehitriny ny fanakatonana tranomboky any ambanivohitr'i Shina Tanibe, mandrava ny sisa fanantenan'ireo mitady fanovana tsikelikely ao Shina.